टीभीएसको दशैंको दौड योजना
काठमाडौं (अस) । टीभीएस टू–ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले उपभोक्ता प्रवद्र्धन योजना अन्तर्गत दशैं र तिहारका अवसरमा ‘टीभीएस दशैंको दौड’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । योजनामा सबैले निःशुल्क भाग लिन सक्ने टीभीएसले बताएको छ । दौडमा टीभीएस शोरूममा नगइकनै वा टीभीएस बाइक नकिनेरै पनि सहभागी बन्न पाइने बताइएको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा म्याराथन दौड गर्ने बताउँदै जगदम्बा मोटर्सले यही भदौ २८ गते शनिवार काठमाडौंमा पहिलो दौड गर्ने जानकारी दिएको छ । उक्त दिन बिहान ७ बजेदेखि दौ८ शुरू हुने कम्पनीका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘दशैंको चहलपहलले हामीलाई छोइसकेको छ । चाडलाई रमाइलो बनाउन ‘स्वाथ्यका लागि रमाइलो दौड’ भन्ने नाराका साथ म्याराथन दौड गर्न लागेका हौं ।’ दौड नक्साल बालमन्दिरबाट शुरू भई सिटी सेन्टर, कमलादी, पुतलीसडक, भृकुटीमण्डप, भद्रकाली, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, दरबारमार्ग, नागपोखरी हुँदै टीभीएस शोरूम नक्सालमा पुगी समापन हुनेछ ।
सबै उमेर सबै समूहले दौडमा भाग लिन सक्ने बताइएको छ । रमाइलो दौडमा सहभागी हुने सबैलाई स्योर सट छूटस्वरूप रू १ हजार प्रदान गरिनेछ भने प्रथम हुनेलाई रू. ५० हजार, द्वितीय हुनेलाई रू.२५ हजार र तृतीय हुनेलाई रू. १५ हजार पुरस्कार दिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौंमा हुन लागेको रमाइलो दौडमा सहभागी बन्न चाहनेले नक्साल, कुमारीपाटी र टेकुमा रहेको टीभीएस शोरूमहरूमा आफै गई वा टीभीएसको वेबसाइटबाट अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, दौड शुरू हुने दिन नक्साल बालमन्दिरमै बिहान ६ बजे उपस्थित भएर पनि आफ्नो नाम दर्ता गराउन सकिन्छ । टीभीएसले दौडमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकद्वारा पासाङल्हामु प्रतिष्ठानलाई सहयोग[२०७७ जेठ, १९]
कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदानले किसानमा उत्साह[२०७७ जेठ, १९]